RAVAN’ NY ZANDARY AVY AO AMIN’NY BORIGANDIN’AMBATOMANOINA NY TAMBAZOTRAN-JIOLAHY IRAY
Tambazotran-jiolahy mpangalatr’omby any amin’ny Faritra Ambatomanoina, izay ahitana ihany koa mpandray halatra sy ny mpivarotra omby halatra ary koa ny mpanadio omby halatra no ravan’ny Zandary avy ao amin’ny Borigady Ambatomanoina ny voalohan’ny volana Septambra lasa teo. Marihina fa olona mañana ny toerana ao amin’ny Kaominina Ambatomanoina ihany no tompon’antoka mpanatanteraka ny halatr’omby any an-toerana dia ny delegen’ny arrondissement ao Ambatomanoina no sady ao amin’ny Kaominina Ambohibary ihany koa.
Ny 27 Aogositra lasa teo tokony ho tamin’ny 9 ora alina dia notafihan’ny adian-dahalo ny tanana iray antsoina hoe Andepona, Fokontany Belavabato, Distrika Anjozorobe. Araka ny vaovao voaray dia nanapoaka basy ireo dahalo raha vao niditra ny tanana no sady nitsoka kiririoka mafy. Ny sasany tamin’izy ireo avy hatrany dia nanararaotra namaky valan’omby. Omby efatra, izay an’ny tokantrano iray no lasa tamin’izany. Nanao ny fanarahan-dia ny Zandary kanefa dia very teny an-dalana ireo mpanara-dia noho ny andro mbola maizina.
Ny vaovao azon’ny Zandary no nahafantarana fa any Ambatomanoina no misy ireo omby halatra tany Andepona. Tratra teo amin’ny mpivaron-kena iray tokoa ireo omby halatra. Tamin’ny alalan’ny lohan’omby izay efa novonoiny ary saika amidiny no nahatrarana ireo omby halatra.
Dimy lahy no voatana tamin’ity raharaha ity ary efa natolotra ny fampanoavana izy ireo ny 07 Septambra teo.
Ireo mpangalatr'omby : Sary ZP